အီးယူအဖွဲ့လာရောက် လေ့လာနေခြင်းသည် မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ?? - Yangon Media Group
အီးယူအဖွဲ့လာရောက် လေ့လာနေခြင်းသည် မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ??
ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အရေး ရုပ်သိမ်းရန် အီးယူအဖွဲ့လာရောက် လေ့လာနေခြင်းသည် အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဟန့်အ တားစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပြီး ဖြေ ရှင်းနိုင်ပါက အထည်ချုပ်၏တိုးတက် မှုသည် နှစ်စဉ်၃၅ရာခိုင်နှုန်းရှိလာ နိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့် စိုးက ပြောသည်။
အီးယူကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေး စိစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့(EU EBA Monitoring Mission)အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရခိုင်အပါအဝင် အခြားဒေသများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ တိုင်းပြည်၏အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား တို့၏ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ၊ ဆက်ဆံရေးများအား လာရောက် စိစစ်သုံးသပ်လေ့လာရန် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ယခုလနောက်ဆုံးပတ်တွင်လာ ရောက်ခဲ့ပြီး အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ် သမားသမဂ္ဂတို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ် ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်စိုး က ”ဒါကအနှောင့်အယှက်အဟန့် အတားတစ်ခုပါပဲ။ အဟန့်အတား၊ အနှောင့်အယှက်၊ စိန်ခေါ်မှုဆိုတာ တွေ့တာနဲ့ လက်မြှောက်အရှုံးပေး လို့မရဘူး။ ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားရမယ်။ GSP ကို လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ကြည့်တာ သူတို့ရဲ့ Constitution အရ မှန်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုလိုလူမှုအဖွဲ့အ စည်းတွေ၊ စီးပွားရေးကိစ္စတွေ အခြား ကနေ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တွေရနေတာတွေကိုလည်း သူတို့ ဘက်က ဇောင်းပေးကြည့်သွားနိုင် မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာသူတို့ဘက် ကလည်းကောင်းတယ်။ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လည်း အနှောင့်အယှက် အဟန့်အတား မဖြစ်ဘဲ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင် မယ်။ မရုပ်သိမ်းခဲ့ရင်တော့ နှစ်စဉ် ၃၅ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာနိုင်ပါ တယ်။ အီးယူကိုပို့နေတဲ့ရာခိုင်နှုန်း က ၇ဝရာခိုင်နှုန်းကျော်တယ်။ ရှိတဲ့ အလုပ်သမားက ငါးသိန်းရှိတယ်။ အီးယူအတွက်လုပ်နေတဲ့ အလုပ် သမားက သုံးသိန်းခွဲရှိတယ်။ အဲဒီ သုံးသိန်းခွဲကနေ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ကိုမပြိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင် စက်ရုံတွေက ရပ်တည်လို့မရဘူး။ ရပ်တည်လို့မရ ရင် အဲဒီစက်ရုံတွေမရှိတော့ရင် အ လုပ်လက်မဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေ ဖြစ်လာ မှာပေါ့”ဟု အောက်တိုဘာလ၃ဝ ရက်က ပြောသည်။
အီးယူကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေး စိစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့(EU EBA Monitoring Mission) အဖွဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသို့လာရောက်ခြင်းကို ကုန်သည် စက်မှုအသင်းချုပ်အနေဖြင့် ကြိုဆို ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီ စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင် အီးယူ သည် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးပြု ပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အရှိန်အဟုန် မြှင့်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေစဉ်အခါ တွင် နိုင်ငံ၏လက်ရှိအခြေအနေများ ကို ရေရှည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် အီး ယူအပါအဝင် နိုင်ငံတကာမှအားပေး ကူညီရန် အသင်းချုပ်အနေဖြင့်အ ထူးမျှော်မှန်းထားရှိကြောင်း သိရ သည်။
ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ၏ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေး မှူး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်က ”ဒီမစ်ရှင်က သူတို့ကို ရွေးပြီးလွှတ်လိုက်တဲ့မစ်ရှင် ဖြစ်တဲ့အတွက် တော်တော်တရား ဝင်တဲ့မစ်ရှင်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့များ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ရုပ်သိမ်းခံရမယ်ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့၁၅ နှစ်ကတည်းက အဲဒီဒုက္ခကိုခံထား ပြီးပါပြီ။ သက်ရောက်မှုကထင်ရှား ခဲ့ပါတယ်။ စက်ရုံ၁၅ဝပိတ်သွားပြီး အမျိုးသမီးငယ် ရှစ်သောင်းကျော်နဲ့ အမျိုးသားငယ် ရှစ်ထောင်လောက် က ချက်ချင်းအလုပ်ပြုတ်သွားတယ်။ အခြားအလုပ်တွေဆီ ရောက်သွား တယ်။ ထောင်နဲ့သောင်းနဲ့ချီတဲ့အ မျိုးသမီးတွေက အခွင့်အရေးယူတာ ခံရတယ်။ Sex Srecive တွေဖြစ် သွားတယ်။ ထိုင်းနယ်စပ်၊ တရုတ်နယ် စပ်တွေရောက်သွားကြတယ်။ ဒါက တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ US က report လုပ်ထားတာပါ။ ဒါတွေကိုထပ် မမြင်ချင်တော့ဘူး။ သူတို့ ကျွန်မတို့ ကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်ရင် လူ့အခွင့်အရေးကို ဘယ်လောက်အ ထိအားပေးရာရောက်မလဲ။ ကျွန်မ တို့ကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်တာ ဟာ မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်မတို့ကို ဆက်ပြီးတိုးတက်စေချင်ရင် ဒီအဆက် အသွယ်ဖြတ်လို့မရပါဘူး။ ဆက်ပြီး အားပေးနေရပါမယ်”ဟု ပြောသည်။
အီးယူကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေး စိစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့(EU EBA Monitoring Mission) အဖွဲ့၏မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း သန်း ပေါင်းများစွာသော အလုပ်သမားများ နှင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အထူး အားဖြင့် အထည်ချုပ်၊ ဖိနပ်ချုပ် စသည့် CMP ကဏ္ဍနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍများအပေါ် ကုန်သွယ်မှုအထူး ခံစားခွင့်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု များကို နားလည် သဘောပေါက် လက်ခံသွားကြမည်ဟု အသင်းချုပ် အနေဖြင့် ယုံကြည်ကြောင်းထုတ် ပြန်ထားရှိသည်။
ရိုက်ကူးပြီး ငါးနှစ်ကျော်ကြာမှ ရုံတင်ပြသခွင့်ရရှိသည့် 'မှော်ဝင်သမန်းကျား' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကာ??
အတ္ထုပ္ပတ္တိရေးရန် အသင့်မဖြစ်သေးဟု Alesha Dixon ဆို
တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်ငါးခုတွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် နေအိမ် ၁ဝဝ ကျော် ပြိုကျပျက်စ?
မဏိပူရ ကသည်းလူမျိုးများ၏ အုန်းသီးရေမျှောပွဲနီးချိန်တွင် တမူးနယ်စပ်၌ နေ့စဉ် အုန်းသီးအလုံး?